Florentino Perez oo ka warbixiyay arinta kaliya uu Luca Modric kaga dhaqaaqi karo kooxda Real Madrid – Gool FM
Florentino Perez oo ka warbixiyay arinta kaliya uu Luca Modric kaga dhaqaaqi karo kooxda Real Madrid
(Real Madrid) 02 Agoosto 2018. Madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez ayaa meesha ka saaray muranka ku aadan in Luca Modric lala xiriirinayo inuu ka tagayo garoonka Santiago Bernabeu.
Qaar ka mid ah ilo wareedyo xog ogaal ah ayaa waxay sheegeen inay jiraan kooxo doonaya inay helaan saxiixa Luca Modric.
Sidoo kale waxaa jiray warar ku aadan in xidiga reer Croatia ee Luca Modric uu k dalbaday maamulka kooxda Real Madrid inay ka fasaxaan garoonka Santiago Bernabeu.
Laakiin madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez ayaa u sheegay saxaafada magaalada Madrid “Fursada kaliya uu Luca Modric kaga dhaqaaqi karo Real Madrid ayaa ah in la bixiyo qiimo dhan 750 milyan euro”.
Hadalka madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez ayaa waxay ka dhigan tahay inaysan suuragal noqon Karin xiligan in Luca Modric uu ka dhaqaaqo Los Blancos, maadaama ay adkaan doono in qiima intaas la ag ay kooxi ka bixi doonto xidig jira da’aada 32-aad.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu sheegay in kooxda Inter Milan ay tahay kooxda xiisaha ugu balaaran ka muujineysa inay la wareegto saxiixa laacibka reer Croatia, laakiin RealMadrid ayaa diidan inay dhageysato dalab kasta ee laga soo gudbiya xidigeedan.